Vaovao tselatra 23 oktobra 2016 amin'ny telo maraina | Hevitra MPANOHARIANA |
Vaovao tselatra 23 oktobra 2016 amin'ny telo maraina
2016-10-23 @ 07:44 in Ankapobeny
Hatreto, nanomboka alakamisy alina ka hatramin'ny asabotsy, tapaka jiro tanteraka ny tanànan'Ambositra iray vohitra, araka ny fitarainan'ny mpiara-miasa amin'ny tena. Tsy fantatra moa izay tena zava-misy: izay tokoa ve no izy? Aiza tokoa moa ny olona tapaka jiro no afaka mampita ny fitarainany rehefa tsy misy ny herinjiro hamelomana vatoaratra ohatra?
Mariho fa efa nisy tranga tahaka izao ihany koa ny faritra Analavory, Imerintsiatosika ary Tsiroanomandidy tany alohaloha tany. Tsy mampino anefa izay zava-misy izay. Tsy mahagaga raha nisy ny fitroarana tany Farafangana tany ka nandoroan'ny olona ny biraon'ny JIRAMA.
Tezitra tamin'izany fandoroana fananana izany ny ankamaroan'ny olona, eny fa na izaho izay manoratra io aza, saingy tsy hainao ary tsy takatrao ny zavamisy iainan'ireo mponina ireo mahatonga an'izany fanapahan-kevitra faratampony izany. Fantatry ny mpitondra tsara izany fahatezerana izany ka nahatonga ny fandefasana mpamelona angovon'aratra tany an-toerana. Rehefa mandoro fananana ve ny olona vao mikorapaka?
Manoratra aho satria alina fanindroany izay no tapaka maharitra ihany koa ny jiro eto amin'ny misy ahy eto Antananarivo renivohitra. Ny resaka nifanaovako tamin'ireo izay nifampitafa tamiko any amin'ny toeran-kafa ato anatin'ny Kaominina ihany no nahafantarako fa faritra maro no miaritra izany tsy fisian-jiro maharitra amin'ny alina izany.
Ny Zoma maraina tamin'ny efatra ora, no niainako ihany koa ny fitarainan'ny olona tamin'ny radio hoe rehefa tapahana dia tapaho tanteraka fa aza velomina telo segondra dia vonoina iray minitra dia velomina telo segondra dia vonoina iray minitra misesisesy fa tamin'ny dimy maraina vao novonoina tanteraka tsy niverina intsony ary tsy fantatro izay ora niverenany fa lasa niasa aho.
Manoratra ihany koa aho, satria tapaka hatramin'ny 3G (fanaovako avotra farany hiseraserana ankoatra ny ADSL fampiasa) amin'izao fotoana anoratako izao... Toa zary karazana fanampenam-bava izato izy, ary fanelingelenana tanteraka amin'ny asa mifandraika amin'ny aterineto... milaza fa tena tratra aoriana tokoa isika ary voasembantsembana ihany koa ny hoavin'ny asa fihariana. Raha tsy tsapanao ny halalin'ireo resaka ataoko ireo dia aza gaga raha mahita ireo hadalana ataon'ny Malagasy malaza ho hendry sy tia milamina tsy tia korontana.